1-da Luulyo oo si weyn looga xusay magaalada Muqdisho
Buluugleey July 2, 2005
Waxaa dalka Soomaaliya oo dhan si wayn looga xusay munasabada 1-da Luulyo oo ah maalintii Gobolada koonfureed ay ka xoreebeen gumaysigii Talyaaniga iyo Israacii labadii Gobal ee waqooyi iyo Koonfur ee gu beegneed 1960kii. Xafladahaas ee lagu maamuusayo munaasabadaas waxay ka dhaceen dalka gudahiisa iyo dibadiisaba. Waxayna dadweynaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba munaasbada 1-da Luulyo oo ka wareegtay 45 sano ku soo dhaweeyeen farxad iyo qiiro wadaninimo.
Munaasabada maalinta gobanimada ee 1-da Luulyo ayaa si weyn looga dabaal dagay magaalada Muqdisho magaala madaxda dalka Soomaaliya iyadoo lagu soo bandhigay taariikhdii loo soo maray halgankii xurnimada iyo siidii loola dagaalamay gumeysiga Talyaaniga iyo Ingiriiska. Waxaa laga akhriyay khudbado la xiriira Heerarkii kala gadisnaa ee soo maray dalka intii xuriyada la qaatay.
Munasabadaas oo ku aadaneyd maalinta xornimada, waxaa xaflad weyn oo si heer sare ah loo agaasimayay ka dhacaday magaalda Muqdisho waxaana ka soo qayb galeen Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Shariif Xasan shiikh Adan, xubnaha dowalada KMG ka tirsan ee ku sugan Caasimada dalka Muqdisho iyo masu’uuliyiin badan oo u soo halgamay gobanimada Soomaaliya.